KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 15/04/2012
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:58 AM No comments:
Burma-Myanmar-Situation Report Sanctions EU Ashton.mp4
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:54 AM No comments:
ငယ်ငယ်က မေမေပြောတဲ့စကားသွားအမှတ်ရတယ်။ အဲဒါက "မင်းသူခိုးနဲ့ ပေါင်းရင် မင်းလည်းသူခိုးကျင့် သူခိုးကြံ့တွေ တတ်လာမယ်" ဆိုဒါ။ တပ်မဟာ(၄)မှ လူကြီးမင်းများနှင့်ရဲဘော်တို့ ခင်ဗျား.. ဒီတခါတော့ ဗမာစစ်တပ်ကို မဆဲတော့ဘူး.. ကိုယ့်ဒူးကို ကိုကိုယ်တိုင် ပေါက်ဆိန်နဲ့ ပြန်ပေါက်ခွဲဖို့ ပြင်နေပြီဆိုဒါ.....
Friday, April 20, 2012 မြန်မာ့အရေး စိတ်ဝင်စားသူများ ဖတ်ရှုကြည့်သင့်သည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဆောင်းပါးများ (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ဖတ်ရှုရသည့် မူရင်းအတိုင်း PDF ဖိုင် ပြုလုပ်၍ တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။) Articles From Swe Swe Kyi's Facebook
Articles From Swe Swe Kyi's Facebook
ပဲခူးမြို့တွင် ဒုတိယမြို့နယ် တရားသူကြီး၏ ဇနီးက မီးပူဖြင့် လက်ရောက် ကျူးလွန်ခြင်း ခံခဲ့ရသော အိမ်ဖော် မအေးယုအောင်ကို အိမ်ရှင်များက အလိုမတူဘဲ ထိန်းသိမ်းထားခြင်း ခံနေရကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူက စွပ်စွဲ ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပဲခူးမြို့ ဥဿာမြို့သစ်ရပ်ကွက်ရှိ တရားသူကြီး ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း၏ ဇနီး ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်က ၎င်းတို့ထံတွင် အိမ်ဖော် အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသော မအေးယုအောင်အား မီးပူဖြင့် အရေပြားများ စုတ်ပြဲသည်အထိ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် သတင်းပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ခေါ်ယူရန်ကြိုးစားသော်လည်း အိမ်ရှင်များက အတင်းအကျပ် ထိန်းသိမ်း ထားကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ကြူကြူ က ပြောပြသည်။
“သူတို့က ခုချိန်ပြန်လွှတ်လိုက်လို့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာရင် သူတို့ ဒုက္ခရောက်မှာ ကြောက်လို့ သမီးကို ပြန်မလွှတ်တာ။ ကျမ သမီးကို သွားတွေ့တုန်းကလည်း ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်က ကျမကိုပါ တရားစွဲမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်။ သူတို့က ဒဏ်ရာတွေ ပျောက် ကင်းသွားမှ ပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်”ဟု ဒေါ်ကြူကြူ က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယခုအခါ သမီးဖြစ်သူ မအေးယုအောင်မှာ ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း၊ ဒေါ်ဖြူဝင်းသက် တို့နှင့်အတူ ပဲခူးမြို့တွင်ရှိနေပြီး မိခင်ဒေါ်ကြူကြူ နှင့် လည်း ဆက်သွယ်ခွင့် မပေးကြောင်း၊ မအေးယုအောင် မှာ မီးပူဖြင့် ကပ်ခံထားသော လည်ပင်း၊ ရင်ဘတ်၊ လက်မောင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက် တို့တွင် ဒဏ်ရာများ အပြင်းထန်
ခံစားနေရကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ယင်းအမှုကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခဲ့သော ပဲခူးတိုင်း လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အထူး အဖွဲ့ ရဲ အရာရှိများ ပြောဆိုချက်အရ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်မှ မအေးယုအောင်အား မီးပူဖြင့် ကပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အလားတူ မအေးယုအောင် ကလည်း ပဲခူးမြို့ လူမှုကူညီရေးအသင်းက ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်သံ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတွင် မီးပူဖြင့် အကပ်ခံရကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
သမီးဖြစ်သူ သတင်းအား ကြားသိရပြီး၂ ပတ်ကျော်အကြာတွင် ဦးအောင်ဖုန်းဝင်းထံ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်ရာ၊ ဦးအောင်ဖုန်း ဝင်း က ရန်ကုန်မြို့တနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်၍ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အလှူငွေဟုဆိုကာ ကျပ် ၃ သိန်း ပေးကြောင်း၊ မိမိ အနေဖြင့် စာမတတ် ၍ ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း လက်မှတ် ထိုးခိုင်းသော စာရွက်ပေါ်တွင် လက်ဗွေ နှိပ်ပေးခဲ့ကြောင်း ဒေါ်ကြူကြူ က ဆက်ပြောသည်။
ယခုအခါတွင် သမီးဖြစ်သူ မအေးယုအောင်နှင့် ဆက်သွယ်လို၍ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ရာတွင်လည်း အိမ်ရှင်များက ဖုန်းပိတ်သဖြင့် ဆက်သွယ်၍ မရသကဲ့သို့ မူရင်းနေထိုင်သည့် နေအိမ်မှ ရွှေ့ပြောင်းသွားသဖြင့် အဆက်သွယ် ပြတ်တောက်နေကာ သမီးဖြစ်သူ အတွက် စိုးရိမ်နေရသည်ဟု ဒေါ်ကြူကြူက ဆိုသည်။
ယင်းအမှုအား လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသက်ဆွေ ကမူ မအေးယုအောင် မတရား နှိပ်စက်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိခင် ဒေါ်ကြူကြူ က ပဲခူးမြို့ပေါ်ရှိ လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံကာ တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ပြော သည်။ အမှုလိုက်ရန်အတွက်လည်း ရှေ့နေများက သက်သေ အထောက်ထားများ စုဆောင်းလျက် ရှိကြောင်း ခိုင်လုံသည့် အထောက်ထားများ ရရှိထားကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ယခုအမှုတွဲတွင် ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ တရားသူကြီး ဦးအောင်ဖုန်းဝင်းကို အမှုဖျောက်ဖျက်ရန်ကြိုးစားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုသွားရန်ရှိသကဲ့သို့ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နယ်မြေခံ အမှတ် (၃) စခန်းမှူး ဦးသိန်းဦးကိုလည်း အမှုထိန်ချန်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲရန်ပြင် ဆင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးအေးမြင့် က ပြောသည်။
“ဦးအောင်ဖုန်းဝင်းက အမှုကို ငွေပေးပြီး ဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဒဏ်ရာတွေကို ဆေးစစ်မှာစိုးလို့။ ကလေးကို မိဘထံပြန် ထည့် မပေးဘူး။ စခန်းမှူးက ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ဆီမှာ ကောင်မလေးက သွားတိုင်တာ အိမ်ရှင် ဦးအောင်ဖုန်းဝင်းကို ခေါ်ပြီး ပြန် ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့တို့ကိုပါ တရားစွဲဖို့ ပြင်တာ”ဟု ဦးအေးမြင့် က ပြောသည်။
မအေးယုအောင် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ နယ်မြေခံအမှတ် (၃) ရဲစခန်းသို့ ယနေ့အထိ တိုင်ကြားလာမှုမရှိကြောင်း၊ ကွင်းဆင်း စုံစမ်းရာတွင်လည်း အိမ်ရှင်က မီးပူဖြင့် ကပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် မီးပူဖြင့် ထိမိခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု စစ်ချက်များ ရရှိထားကြောင်း စခန်းမှူး ဦးသိန်းဦး က ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
မအေးယုအောင် မီးပူဖြင့်အကပ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများ ပျံ့နှံ့လာပြီးနောက် တပတ်အကြာတွင် နေပြည်တော် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ် (နရခ) က စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ညွှန်ကြားခဲ့သဖြင့် ပဲခူးတိုင်း လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ က ကွင်းဆင်း စုံစမ်းခဲ့ကြောင်း တာဝန်ခံ ဒု ရဲမှူး ဦးရဲဝင်းအောင် က ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ယနေ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် ထိုအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ဌာနနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၃ မိနစ်
မြန်မာအစိုးရက တင်ရှိနေသော ကြွေးမြီ ယန်း သန်းထောင်ပေါင်း ၃ဝဝ (ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၃.၇ ထောင်)အား ဂျပန်အစိုးရက လျှော်ပစ်ရန် ရှိကြောင်း ဂျပန် Asahi Shimbun သတင်းစာကြီးက ရေးသား ထားသည်။
တရားဝင် သဘောတူညီချက်ကိုမူ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Yoshihiko Noda နှင့် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ စနေနေ့တွင် တိုကျိုမြို့၌ တွေ့ဆုံ၍ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကာ ‘အပြည့်အဝ’ အကူအညီများလည်း ပြန်လည် ပေးအပ်တော့မည်ဟု ဂျပန် အရာရှိများအား ကိုးကား၍ ရေးသားထားသည်။
၂၅ နှစ်ကြာ ရပ်ဆိုင်း ထားသည့် အကူအညီများကို မြန်မာအစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီအရေး ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်မှုများအရ ဂျပန်အစိုးရက ဤကဲ့သို့ ပြန်လည် စတင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ပထမ အဆင့်အနေနှင့် ယန်းသန်းပေါင်း ၁၂၇.၄ ထောင်အား လျှော်ပစ်ရန် ရှိပြီး ၎င်းမှာ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ် ကတည်းက သဘော တူညီခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရနှင့် အပြီးသတ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ထို့နောက် အတိုးငွေနှင့် ဆပ်ရန် နောက်ကျ၍ ဆောင်ရမည့် ဒဏ်ငွေ ယန်းသန်း ၁၇၆.၁ ထောင်အား လျှော်ပစ်နိုင်ရန် အတွက် နောက်ထပ် တနှစ်အတွင်း မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ တိုးတက်မှုအပေါ် အခြေခံ သုံးသပ်ပြီးမှ လျှော်ပစ်မည် ဖြစ်သည်။
အမှန်စင်စစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂျပန်နိုင်ငံအပေါ် ကြွေးမြီအဖြစ် ယန်း သန်းထောင်ပေါင်း ၅ဝဝ ခန့် တင်ရှိထားပြီးဖြစ်၍ ကျန်ငွေ ယန်းသန်းပေါင်း ၁၉၈.၉ ထောင်အား ပြန်ဆပ်နိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနများမှ နောက်ထပ်ချေးငွေ သစ်များ ရယူရဦးမည် ဖြစ်သည်။ ဂျပန်အစိုးရ အနေဖြင့်လည်း ထိုပမာဏခန့် ထပ်မံ ချေးပေးရန်ရှိကာ ထိုချေးငွေသစ် ပြန်ဆပ်ရက်ကိုလည်း တိုးချဲ့ သတ်မှန်ပေးရန် ရှိသည်။
တင်ရှိ အကြွေးများအားလုံး ကြေလည်ရေးနှစ် နောက်ထပ် အကူအညီသစ်များ စတင်ရေးအတွက် ဦးသိန်းစိန်၏ ငါးရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း ဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလအတွင်းက ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်စဉ် ဒီမိုကရေစီအရေး ဦးတည်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ပြုလုပ်ရန် မြန်မာအစိုးရအား တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဂျပန်အစိုးရ အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများ ပြန်လည်ပေးရေး ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား တရားမျှတမှု ရှိ/မရှိ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေမည်ဟု အတွင်းဝန်ချုပ် Osamu Fujimura က ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:42 AM No comments:
Sorry ပဲ ညီမလေး ...
မင်းကိုယ်တိုင်အတွက် ရောင်းပန်းလှဖို့ ၊ ဈေးကွက်ဝင်ဖို့
ပါတိတ် ၊ သရီးစတက် ၊ မီနီစကပ် ၊ နှုတ်ခမ်းနီ ပါးနီ ၊ အော်ဒီကလုံး
Sorry ပဲ ညီမလေးရေ ...
နှမ်းပဲစိုက်စိုက် ၊ ဘူးပဲပျိုးပျိုး
နွေစပါး ၊ မိုးစပါးနဲ့ သီးထပ်သီးညှပ်
ဒါကိုတော့ မင်းလည်းသိတယ် ၊ ကိုယ်လည်းအသိပဲ။
အရှက်သိက္ခာ တစ်ရွေးသားမျှမရှိရှာတဲ့ လူ့ငနွားတွေ
နိုကီရာ ၊ ဆိုနီအဲရစ်ဆင် ၊ ပင်နာဆိုးနစ်တို့နဲ့
တရားတော့ ရှိမှာမဟုတ်ဖူး ၊
မေတ္တာထားဖို့ တွေးခေါ်တတ်မယ်မထင်ဖူး ၊
အရင်အချိန်တွေတုန်းက ကိုယ်တို့ပြောခဲ့တယ် (တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုပေါ့)
( ... ) နိုင်ငံ ဆိုပြီးတော့လေ ...။
မဲဆောက်မှာ ၊ မယ်ဆိုင်မှာ ၊ ဘီကေကေမှာ ၊ ကြယ်ဂေါင်ရွှေလီမှာ
အင်း ... ... ...
ဖဦးထုပ်တွေ ၊ နငယ်တွေ ၊ ဘကုန်းတွေ
မိုးကျရွှေကိုယ် ၊ တိုလီမိုလီ ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း ၊ ပေါသွပ် ၊
လျှာတစ်သပ်သပ် ၊ ပါးစပ်တစ်ပြင်ပြင်
နှုတ်ခမ်းတစ်လန် ပန်းတစ်လန် လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုး
တစ်ခါသုံးဆပ်ပြာ ၊ ငွေခြည်ရောင် ရေခဲသေတ္တာ
အရပ်ထဲမယ် ကိုယ်လေး ခေါင်းလေးတောင် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် မလှုပ်ဝံ့တာ ...
မင်းတို့ ကိုယ်စီ ဒုလ္လဘတစ်ခုစီရှိတယ်
Sorry ပါ ညီမလေးရယ် ...
Sorry ပါ ညီမလေးတို့ရေ ...
By မားဆိုး "http://www.facebook.com/profile.php?id=100000146656174"
" မြန်မာလူမျိုးမှန်လျှင် မြန်မာအမျိုးသမီးများကို တန်ဖိုးထားကြပါ။ မြန်မာအမျိုးသမီများသည်လည်း မိမိတန်ဖိုးကို ထိန်းသိမ်းကြပါ။ "
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:03 AM No comments:
နော်ဝေနိုင်ငံရောက် စစ်ကျောင်းတက်နေသည့် ကရင်လူငယ်တဦးရင်ဖွင့်သံ
နော်ဝေ ခေတ္တရောက်နေတဲ့ ဗိုလ်မှူးထူးထူးလေး နှင့် စောဆါလား
ကျွန်နော်နာမည် စောဆါလါးလို့ခေါ်ပါတယ်. ကျွန်တော့် ညီလေးနှင့်အတူ နော်ဝေးကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက နော်ဝေးနိုင်ငံသား မိသားစု တစုရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမှူကြောင့် ကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်. ယခု ကျွန်တော်အသက် ၂၄ နှစ် ပြီးတော့ နော်ဝေးနိုင်ငံသား ခံယူလိုက်ပါပြီ. ကျွန်တော့်မွေးမိခင်ဟာ ငယ်ငယ်လေးထဲက ဆုံးသွားပါပြီး. အဖေက ယခုထိသူက တပ်မဟာ ၄ ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင် တဲ့ရဲဘော်တစ်ဦးပေါ့ဗျာ. ယခု စစ်ကျောင်းတက်နေပါတယ်. တကယ်လို့ အခွင့်အရေး ပေးလာမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် တပ်အရာရှိ ဖြစ်တဲ့အထိ ဆက်တက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။
KNU နှင့် ဗမာ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်ပတ်သက်ပြီး သဘောတူတယ် တိုက်တွန်းပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံရေး ပြသာနာဟာ အများနှင့်ဆိုင်တဲ့ ပြသာနာမို့ KNU အ၇မ်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ တို့အမိ KNU နိုင်ငံရေး တရားခံ မဖြစ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရင် အဖေနှင့်မွေးရပ်ဇာတိကို ပြန်တွေ့ချင်တယ် ပြန်နေလည်ချင်သေးတယ်.
အဝေးရောက်က၇င်လူငယ်နှင့်ညီမငယ်တွေကို ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်. ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ပြန်မမေ့ကြဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်. ကျွန်နော်တို့ဟာ ကရင်လူမျိုးဆိုကိုလဲ သတိရကြဖို့လိုပါတယ်. ငါဟာကရင်လူမျိုးပါလို့ မရှက်မကြောက် မတ်မတ်မားမား အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ကြဖို့လိုပါတယ်.. ကိုယ့်လူမျိုးဂုဏ်ကိုဖော်ထုတ်ကြဖို့ ငါတို့ကရင်လူငယ်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ် ပြီးတော့ ရသမျှအခွင့်အရေးကို ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်. ပညာကို ကြိုးကြိုးစား သင်ယူကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်.. ကျွန်တော့်ဘာပဲလုပ်လုပ် ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးစား မိဘက ဘ၀ကို မမေ့ဖို့ အမြဲတမ်းသွန်သင်ခဲ့ပါတယ်.. တကယ်လို့ ကျွန်တော် ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်လာတဲ့တနေ့ကျရင် ကျွန်တော့လူမျိုးကို ပြန်ပြီး ကူညီချင်ပါသေးတယ်..
ကေအဲန်ယူမှ ဗိုလ်မှူးထူးထူးလေး နှင့် မြန်မာအစိုးရ ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း နော်ဝေရောက်
ဧပြိလ ၁၅ ရက် က ကေအဲန်ယူမှ ဗိုလ်မှူး ထူးထူးလေး နော်ဝေးနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ အပစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေး မှတဆင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆင့်ထိ ရောက်အောင် သင်တန်းတခု တက်ဖို့နော်ဝေးအစိုးရ၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရသွားရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗမာအစိုးရဖက်မှ ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း က ၄င်းသင်တန်းတက်မည့်သူများအထဲ ပါဝင်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗိုလ်မှူးထူးထူးလေး သင်တန်းမတက်ခင် နော်ဝေးမှာရှိတဲ့ကရင်လူထုကို ခေါ်တွေ့ပြီးတော့ သူတို့ သွားမဲ့လမ်းစဉ်ကို ကရင်လူထုအား ရှင်းပြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
သတင်း + ဓါတ်ပုံ = Overran
ဒုက္ခသည်များအား ဒုတိယအကြိမ် လူထုရှင်းလင်းပွဲ ကေအဲန်ယူ ပြုလုပ်ပြီးစီး
ဧပြီ ၁၈ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ဧပြီလ ၆ရက်နေ့က နော်စီဖိုးရာစိန်ဦးဆောင်သည့် ကေအဲန်ယူ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ၁၄ဦးနှင့် မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဘက်မှ ရထားပိုးဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၇ဦး အပါအ၀င် ကိုယ်စား လှယ် ၁၉ဦးတို့က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးကာ ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၃ချက်ဖြင့် နှစ်ဖက် သဘောတူညီမှုများ ရရှိခဲ့ကြ သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ရက်နေ့က ကေအဲန်ယူသည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် တွေ့ဆုံကာ ပဏာမ အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ဇန်န၀ါရီ ၁၆ရက်နေ့၌ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တနေရာတွင် ပထမဆုံးအ ကြိမ် လူထုရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံး အပြုံးကိုယ်စီနဲ့၊ ဆွေးနွေးပွဲအပေါ်မှာလည်း အပြုသဘော အမြင်ကိုယ်စီနဲ့ တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့မှာ KNU အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နော်စီဖိုးရာစိန် ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို နေပြည်တော်မှာ လက်ခံတွေ့တုန်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က KNU အပေါ်ထားတဲ့သဘောထား ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာ ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုသာဆို အမည်ခံအရပ်သားအစိုးရကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေအကြား အပြောင်းအလဲကို လိုလားတဲ့စိတ် ရုတ်ချည်း ပေါ်လာတဲ့ပုံပါပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ရတော့မယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် အချိန်ကောင်းတခု စောင့်နေပြီ စသဖြင့် လူတုိုင်း ရင်ထဲ ရှိလို့လာပြီပေါ့။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိဖြစ်စဉ်မှာ အဓိကပါဝင်နေသူတွေကို အနီးကပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးကွဲပြားသွားပြန်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်က အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ၊ ပညာရှင်တွေ ဦးဆောင်ထားတဲ့ Egress လို့ ခေါ်တဲ့ ပြည်တွင်း NGO တခုကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ လုပ်ငန်းခွဲဝေပေးတဲ့ အစိုးရရဲ့ မဟာဗျူဟာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး အခြေခိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း Egress ရဲ့ ရည်မှန်းချက် တခု ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ဖို့လို့ ဆိုပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးအကြား ယာယီ ကြားဝင် စေ့ စပ်သူအဖြစ် လုပ် ဆောင်ရင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ လ အတန်ကြာ ပါလာနေခဲ့ပါတယ်။ Egress ရဲ့ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ဟာ ဦးအောင်မင်း KNU နဲ့ လာတွေ့တဲ့အခါတိုင်း ပုံမှန် ပါလာပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ ကြားဝင်ဖြန်ဖြေသူတွေလား ဒါမှမဟုတ် စေ့စပ်ဆွေးနွေးသူတွေလား။
နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့ရောက် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း - နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ ကို ဒီဗွီဘီ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးအေးချမ်းနိုင်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်..
အမေရိကန်က မြန်မာအပေါ် အရေး ယူမူ့ တွေ ကို စတင်လျော့ပေးတဲ့ အနေနဲ့ အစိုး ရမဟုတ် တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ရဲ့ စီမံကိန်းတွေတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာလွဲပြောင်းခွင့် ကို အမေရိကန် ဘဏ္ဍရေး ၀န်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးလာဝယ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို ဝိုင်းဝန်း ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်မှုတစ်ခု
Published on 18 Apr 2012 by BurmaVJMedia
ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အိမ်ရှင်မနဲ့ NEW STYLE ကုန်စုံဆိုင်က ဆိုင်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားတွေက အရက်မူးပြီး ဈေးလာဝယ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို ဝိုင်းဝန်း ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်မှုတစ်ခု ဧပြီလ ၁၆ ရက် သင်္ကြန် အတက်နေ့ ညနေ ၆း၃၀ အချိန်လောက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေက တရားဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ မြို့နယ်ရဲစခန်းကို တိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ ရဲတွေက အချိန်မီ ရောက်မလာတဲ့အတွက် တရားခံတွေ ထွက်ပြေးမသွားဖို့ အဲ့ဒီ ဆိုင် နှစ်ဆိုင်ကို ပြည်သူတွေက ဝိုင်းဝန်း ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ည ၈ နာရီခွဲခန့်မှာတော့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရဲစခန်းက ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကို ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပေမဲ့ အခုအချိန်အထိ ဘယ်လို ပုဒ်မတွေနဲ့ အမှုဖွင့် အရေးယူထားသလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ မရသေးပါဘူး။
ရုပ်ရှင်နှင့် ဂီတအနုပညာရှင်များ ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူလူထု ကိုသွားရောက် ဖျော်ဖြေ..အမေစုလည်းအားပေး
Photo - BVJ&Thantharwin
မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည်ကို ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ပထမဆုံး အလှူအဖြစ် ကော့မှုးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာသုံးရွာအတွက် စုစုပေါင်း ငွေကျပ် သိန်း သုံးရာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မဲဖောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ကော့မှုးမြို့အနီးရှိ လယ်ကွင်းပြင်တွင် ယင်းလှူဒါန်းပွဲနှင့် မြန်မာနှစ်ဆန် တစ်ရက်နေ့ ပျော်ပွဲရွင်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင်များ၊ သရုပ်ဆောင်များ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ယင်းအလှူအဖြစ် ပထမဆုရရှိသော ကျေးရွာကို ငွေကျပ် ၁၇၅ သိန်း၊ ဒုတိယဆုကို ငွေကျပ် ၇၅ သိန်းနှင့် တတိယ ဆုကို ငွေကျပ် သိန်း ၅၀ အသီးသီးချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:39 AM No comments:
ကျွန်တော်ကတော့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ နတ်သံကွင်းကျေးရွာမှ ရွာသား တစ်ဦးပါ။
ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာမှာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ လူမိုက်တွေ ပူးပေါင်းပြီး လူတစ်ယောက်ကို အသေ လိုက်သတ် နေတဲ့အကြောင်း ပြောပြချင်လို့ပါခင်ဗျာ။
ဖြစ်စဉ်ကိုမ တင်ပြခင် ဇာတ်ရည် လည်အောင် အရင် ရှင်းပြပါမယ်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်က ဦးမြမောင်ပါ။ ဖုန်းနံပတ်က ၀၉၆၃၁၀၃၉၃ ပါ။
သူက ကားလုပ်ငန်း အကြီးအကျယ် လုပ်ပါတယ်။ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကျွန်းကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွန်းမှီပါ။ တရားမ၀င်တာရော တရားဝင် တာပါ အကုန် လုပ်ပါတယ်။ ငွေရှိပြီး လူရည် လည်တော့ အာဏာပိုင်တွေကို သာမက လူမိုက်အ များအပြားလည်းေ မွးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဘဲ သူတို့အိမ်မှာ အလုပ် လုပ်ဖူးသူ ကိုဟန်ကျော်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ရိုးသား ကြိုးစားပြီး လူချစ်လူခင် ပေါပါတယ်။ သူက အခုဆိုရင် ကားမောင်းသမား ဘ၀ကနေ ကားပိုင်ဝယ် စီးနေပါပြီ။ ကိုယ်ပိုင်ကား လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် လာတော့ လုပ်ငန်းကလည်း တူပြန် ဆိုတော့ စီးပွားပြိုင်ဖက် သဖွယ် ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါနဲ့ကြည့်မရတာနဲ့ အသေသတ်ဖို့ ကြံစည် ပါတော့တယ်။ ပထမနေ့ ၁၄-၄-၂၀၁၂ ရက်နေ့ မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ညီ ကိုအောင်ကြိုင် ဆိုသူက ကိုဟန်ကျော်ကို စိန်စ ခေါ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ ကျွန်က ထမင်းဝတော့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့။ ပြသနာတော်တော် ရှာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လဲ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုမကျော်လွန်နိုင်တာနဲ့ ကြားသာနေတယ် ဘာမှမကူညီနိုင်ပါဘူး။ ညနေပိုင်းမှာ ကိုဟန်ကျော်က အဲဒီ၇ွာကနေတစ်ဖက်ကမ်းကို အိမ်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ကားနဲ့ပစ္စည်းတွေ တင်တာပေါ့။
အဲဒီအချိန်မှာ ကိုအောင်ကြိုင်နဲ့ လူမိုက်အ ပေါင်းအပါများအပြင် နတ်သံကွင်းရွာ ရဲစခန်းမှ ရဲ ၂ ယောက်လဲ လာတား ပါတယ်။ အာဏာပိုင်ရဲတွေ ပါလာတာနဲ့မပြောင်း ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ ၁၅-၄-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ည ၇နာရီခွဲ လောက်မှာ ကိုဟန်ကျော်အိမ်ကို ကိုအောင်ကြိုင်ရဲ့လူ ၅၀ လောက်ဝိုင်းပြီး ခဲတွေနဲ့ပေါက် စိန်ခေါ်ပြီး အိမ်ထဲ အတင်းဝင် ပိုင်နက် ကျူးကျော် ရိုက်နှက် ပါတော့တယ်။
တစ်ရွာလုံး ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ပါဘဲ။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် အိမ်တွေက ခုခံကြ ကူညီကြနဲ့ ကိုဟန်ကျော် နှစ်အိမ်ကျော်လောက်မှာ ရှိတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ကို ထွက်ပြေး ပုန်းအောင်း နေရပါတယ်။
တစ်ရွာလုံးလူ လူမိုက်တွေက လူတစ်ယောက်ကို အတင်း ရှာဖွေပြီး သတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစား နေချိန်မှာ ၇ဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အဲဒီရှေ့က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ၇ှိနေပြီး သူတို့နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်သလိုေ နနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေကို ဥပဒေက မကာကွယ်ဘဲ အာဏာပိုင် တွေကိုသာ ကာကွယ် နေသလားဗျာ။
ဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတော့ ကိုဟန်ကျော်ရဲ့အမျိုးသမီးက ရဲစခန်းကို ပြေးတိုင်တော့လည်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ယောက်လုံး ရှိသေးကြောင်းနဲ့ သူ့ကိုကျော်လို မကောင်းကြောင်း ပြောပြီးပြန်လွှတ် လိုက်ပါတယ်။
ဘယ်လိုများ ညဆက် အိပ်ရပါမလဲဗျာ၊ သူက ကိုယ်တွေ့ပြေးရလွှားရ အိမ်တစ်အိမ်လုံး မှန်ကအစ ရစရာ မရှိအောင် ကွဲပြဲကုန်တာ ဆိုတော့ ကြောက်တာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ထဲက တာဝန်သိပြည်သူ တစ်ဦးကလည်း ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးဆီ ဖုန်းဆက်တော့ ၀န်ကြီးကလည်း ၁၆-၄-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှာ စုံစမ်းဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါလည်းဘဲ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ဦးမြမောင်နဲ့ ကိုအောင်ကြိုင်က အမျိုး အချင်းချင်းရန်ဖြစ်တာသာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီးပြန်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေ မလုံခြုံတော့ပါဘူးဗျာ။
အဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ အမျိုးတွေ၊ တပည့်တွေကို ကြောက်ရတော့ မှန်တာကလည်း အမှားဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ကမြင်ကွင်းကို ပြချင်ပါတယ်။ တစ်ရွာလုံး အုတ်အော်သောင်းနင်းပါဘဲ။ လူတစ်ယောက်ကို လူ ၅၀ လောက် ၀ိုင်းရှာ လိုက်သတ်နေလိုက်တာ ဆူညံ ပွက်နေတာဘဲ။
ဘေးအိမ်တွေမှာ မှန်ကွဲတဲ့အိမ်ကကွဲ ၊ ၀င်ကူရင်း နှုတ်ခမ်းကွဲသူကကွဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီကြပါဦးဗျာ။ ကိုဟန်ကျော် ခမျာမနေနိုင်တော့တာနဲ့ ၁၆-၄-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှာ ကားပေါ်ရှိ သမျှပစ္စည်းနိုင်သလောက် တင်ပြီး မိန်းမ၊ကလေးခေါ်ကာ ညမှောင်ချိန် ၉နာရီခွဲ လောက်ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးရတော့တာပါဘဲ။
သူ ဘယ်ဆက်နေရဲတော့မလဲ။ ဘယ်နေ့ လာသတ်မလဲ။ ဘယ်နေရာ လာသတ်မလဲမှ မသိတာကို။ ကျွန်တော်တို့အရမ်းသနားတယ်ဗျာ။ ကိုယ်ရွာသားဖက်ကလည်း မခံချင်ဘူး။ ဒါနဲ့ကိုယ်တတ်နိုင်တာနဲ့ လာပြီး ကူညီပေးတာပါ။ ဒီသတင်းကိုချက်ချင်းလေးလွှင့်ပေးပါဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ကယ်မှ ရမှာပါ။ သြဇာရှိလို့ အားကိုးပါတယ်။
ဒီသတင်းကအဖြစ်အပျက်အမှန်တွေပါဗျာ။ ပေးစာတစ်စောင် ဆိုတာထက် သတင်းတစ်ခုပေးပို့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ကူညီပါအုံးဗျာ။ ဖြစ်စဉ်ကို စုံစမ်းဖို့ဖုန်းတွေပေးပါမယ်။
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး- ၀၅၄၄၉၀၀၂ နတ်သံကွင်းအိတ်ချိန်း ၀၅၄၅၅၄၄၈ တို့ကို ဆက်ပြီး သတင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မှူးပြောမှာကတော့ ကျွန်တော်ကြိုပြောလိုက်ပါမယ် အမျိုး အချင်းချင်းတွေဖြစ်တာပါလို့ ပြောမှာသေချာပါတယ်။
ဥပဒေပမှာ အဲဒီလောက်ဖြစ်နေတာ ရဲတွေ ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရက်စက်လွန်း ပါတယ်ဗျာ။
ရိုက်နေရင်းကြားတာ တစ်ခုရှိသေးတယ် ကိုအောင်ကြှိုင်က ငါ လူသတ်လာတာ ၇ ယောက်ရှိပြီတဲ့ ကြောက်စရာဘဲဗျာ။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်တယ် လူတစ်ယောက်ကို ကားနဲ့တိုက်သတ်တာ အချုပ်ထဲ ၂ ရက်ပဲဝင်ပြီး ပြီးသွားတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ရဲချုပ်ကြီးနဲ့ သမ္မတကြီးကို ဆက်ပြီးတင်ပြပေစေလိုပါတယ်ဗျာ။
ပြည်ပရောက် မြန်မာများ နေရာ ပြန်ချထားရေး ကွင်းဆင်းလေ့လာ
၁၈ ဧပြီ ၂၀၁၂
အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ပြန်လည် နေရာ ချထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအတွက် မြ၀တီမြို့နယ် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ကွင်းဆင်း လေ့လာမှုတွေ ဒီနေ့မနက်က ပြုလုပ် နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြ၀တီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်တင်နဲ့ အစိုးရဌာနပေါင်း ၁၄ ခုက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ မြ၀တီမြို့နယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကလိုထူးဘော ကရင်အစည်းအရုံး (ကေကေအို)ရဲ့ ထိန်းချုပ် ဒေသဖြစ်တဲ့ ဝေါ်လေနဲ့ ချူးကလိ ဒေသဘက်မှာ ကွင်းဆင်း လေ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ တာဝန်ပေးချက်အရ ခုလို ကွင်းဆင်း လေ့တာတာဖြစ်ပြီး ဒီမနက်ပိုင်းမှာ ကေကေအို အခြေစိုက် ဆုံစည်းမြိုင်မှာ သွားရောက်ပြီး ကေကေအို တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့ပါတယ်။ မြ၀တီခရိုင် တာဝန်ရှိသူတွေ လာရောက် တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကေကေအို အတွင်းရေးမှူး စောဂုဏ်အောင်က အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“သူတို့ပြောတာက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းက လူတွေကို ပြန်ပြီးတော့ လက်ခံဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို သူတို့က ဝေါလေနဲ့ ချူးကလိဘက်မှာ ပြန်ပြီး နေရာ ချထား ပေးပေမယ့်ဟာကို ကျနော်တို့ဆီလာပြီး ဘယ်နေရာ ချထားပေးရင် အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာကို ဆွေးနွေးတာပေါ့။ ကျနော်တို့ကတော့ ဒီဥစ္စာက ကျနော်တို့ လုပ်ပိုင်ခွင်ထဲမှာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ကေအန်ယူတို့၊ ကေအာရ်စီတို့၊ ဒုက္ခသည်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အန်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းတွေရယ်၊ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေ၊ ယူအန်အိပ်ခ်ျစီအာက အရာရှိတွေ အစရှိသူတွေ အားလုံးနဲ့ မြန်မာ အစိုးရတို့ ဆွေးနွေးပြီးမှ ဒါက လုပ်လို့ရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ အဓိကတော့ ဒုက္ခသည်တွေက သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုလိုလားလားနဲ့ စိတ်အပူအပင်ကင်းစွာ ပြန်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့က ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။”
တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးအပြီး ညနေပိုင်းမှာတော့ ဦးမြင့်တင်နဲ့ အဖွဲ့ဟာ ဝေါ်လေကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ညအိပ်ပြီး မနက်ဖြန်မှာ ချူကလိဘက်ဆက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ပြန်လည် နေရာချထားရေးအတွက် သွားရောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ စောဂုဏ်အောင်က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာ ဒုက္ခသည်တွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ တိုက်တွန်းတာ မရှိသလို ပြန်ဖို့လည်း အစီအစဉ် မရှိတဲ့အကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ရှိရင်တော့ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ဖို့ အနေအထားရှိတယ်လို့ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်း ဥက္ကဋ္ဌ စောထွန်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
“နယ်စပ်ဒေသမှာ တိုက်ပွဲတွေ မရှိတော့ဘူး။ တစုံတရာထိ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ရယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်ဖို့ အနေအထားတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခသည် ပြန်ဖို့ စတင် ဆွေးနွေးနိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ၊ နေရပ်ကို ပြန်ပို့နိုင်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ဆွဲနိုင်ဖို့ အခြေအနေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ့် စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရရှိနိုင်မယ့် အချိန်၊ ရရှိနိုင်မယ့် လမ်းစတွေ မြင်လာမယ်။ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိလာမယ့် အချိန်လောက်မှပဲ ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေး အစီအစဉ်တွေ စတင် လုပ်ဆောင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။”
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်နေ ဒုက္ခသည်တွေကို ပူးပေါင်းကူညီပေးနေတဲ့ (တီဘီဘီစီ)အဖွဲ့ရဲ့ စာရင်းအရ ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည် ၁သိန်းခွဲခန့် ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:25 AM No comments:
အစိုးရထံ လက်နက်ချသွားသူများမှာ ပြည်သူ့စစ်များဟု KIA ပြော
Author: ကိုးဒီသွေး | Posted at: 10:44 PM | Filed Under: news
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ မြန်မာအစိုးရထံသို့ လက်နက်ဖြင့် ဝင်ရောက်သွားသူများမှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ မဟုတ်ဘဲ အရပ်သား ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်း KIA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်က ပြောသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:21 AM No comments:
Author: ကိုးဒီသွေး | Posted at: 2:16 PM | Filed Under: news
ဒီကနေ့ သတင်းစာထဲမှာ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၂ ဦး လက်နက်ချတဲ့ သတင်း တွေ့ရပါတယ်။ မြစ်ကြီးနား ဒေသမှာပါ တဲ့။
အစိုးရနဲ့ KIA တို့ ဆွေးနွေးပွဲ အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး မရသေးတာဟာ KIA ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တချို့ သဘောထား တင်းမာ နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ် လို့ ရေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ထိုးစစ်မဆင်ဖို့ ညွှန်ကြားချက် အကြောင်းတော့ သတင်းရှည်ကြီးထဲမှာ မတွေ့ရပါ။ အရေးမပါလို့ ထည့်မရေးတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်း)
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:19 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:14 AM No comments:
ကေအဲန်ယူနှင့်မြန်မာ အစိုးရ တနင်္သာရီတိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်သံ)
ပြည်နယ် ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေကာတာ ဧရိယာထဲ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တောင်တွင် အထူး ဆုတောင်း အစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် မြစ်ဆုံ တန်ဖရဲကျေးရွာမှ သင်းအုပ်ဆရာ Rev. ဘရန်နူးအား ရဲများ မေးမြန်းရန် ဧပြီ ၁၆၊ ယနေ့ဆင့်ခေါ်လိုက်ကြောင်း ရွာသားများပြောသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:07 AM No comments:
THE LADY ရုပ်ရှင် အစအဆုံး -မြန်မာစာတမ်းထိုး(ရုပ်/သံ)
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို အထပ်ထပ်ပိတ်ဆို့ ထားသည့်ကြားမှ အခုလို ကြည့်ခွင့် ရသည့် အတွက် မိတ်ဆွေများအားလုံးကြည့်ရူ့ နိုင်ရန် လင့်ကို ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:44 AM No comments:
အခြေခံပညာရေး၊ အစားအစာဖူလုံရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် မိခင်နှင့် ကလေးကျန်းမာရေးပညာ ဘာသာရပ်များအတွက် ရိုးရိုးဘွဲ၊ မဟာဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့ သင်တန်းများကို မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် ချီးမြှင့်ရန် စီစဉ်ထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရန် အထူးလိုအပ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင်းမှ ကျောင်းသား ၃၀ ဦး သြစတြေးလျတွင် ပညာတော်သင်ဆုဖြင့် ကျောင်းတက်ခွင့် ရရှိနိုင်မည်။
လျှောက်လွှာများကို ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ ၂၀၁၂ နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ထားရမည်။
အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာများကို http://oasis.ausaid.gov.au တွင် တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
သြစတြေးလျသံရုံး။ ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ၃၀ ရက် ဧပြီလ ၂၀၁၂ နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်လွာတင်နိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၃ တွင် ကျောင်းစတင် တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
More general information about the Australia Awards, studying in Australia and AusAID can be found at
Ms Thin Pyie Oo (Linda) Scholarships Coordinator AusAID
Phone: +95 (0) 1 251810 ext 212
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:39 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:37 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:35 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:34 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:17 AM No comments:
ကရင်ပြည်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်း(၁) /ကရင်ပြည်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်း(၂)
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးနဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့အကြား စစ်မှန်တဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ရရှိနိုင်ရန် ကြိုးစားလျက် ရှိကြ
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းချက်တရပ်အနေဖြင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ဧပြီ ၄ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များ၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီ အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များနဲ့လည်း တွေ့ဆုံကာ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မယ့် အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး ပဲခူးတိုင်း ကျောက်ကြီးနဲ့ တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့များတွင် ဆက်ဆံရေး ရုံးများ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ ပဲခူးတိုင်း ကျောက်ကြီးဒေသရှိ ပြည်သူများအတွက် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများက အကူအညီပေးနိုင်မယ့် အစီအစဉ်များကိုလည်း ရှေ့ပြေး စမ်းသပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အခုတခေါက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့်၊ ပြည်နယ် တိုင်းအဆင့် မြန်မာအာဏာပိုင်များနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့သလို ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ထိုသို့ ချမှတ်တဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာ code of conduct ဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ စောင့်ထိန်းလုပ်ကိုင်ရမယ့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ချမှတ်ဖို့ကိစ္စလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နော်မေဦးက “ကျမတို့ မြန်မာ့သမိုင်းက စေ့စပ် ဆွေးနွေးပွဲတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် code of conduct လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေကို ချမှတ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိ ရောက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ တခါမှ မရှိခဲ့ဖူးသေးပါဘူး။ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်တယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကလည်း သူတို့အတွက် အသစ်အဆန်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံတယ်။ တိုင်းမှူးတွေ၊ တပ်မတော်အရာရှိတွေကလည်း ဒါကို လက်ခံပါတယ်။ အရင်က ကျင့်ဝတ်တွေ ချမှတ်နိုင်တာမရှိဘဲနဲ့ ညွှန်ကြားချက်ပဲ ရှိတယ်။ တိတိကျကျ ကျင့်ဝတ် မချမှတ်နိုင်ခဲ့တော့ အမှားအယွင်းတွေ ရှိခဲ့တာ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းပေမယ့် အဆန်း မဟုတ်ဘူး။ အခုက အမှားတွေ တတ်နိုင်သမျှ နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတဲ့အခါ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်က အခရာ ဖြစ်လာတယ်။ ချမှတ်ရေးဆွဲဖို့ကလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဘက် လိုက်နာရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ရေးဆွဲ ချမှတ်နိုင်ဖို့ သဘောတူပါတယ်“ လို့ ရှင်းပြပါတယ်။ အခုအခါမှာ ထိုသို့ ရေးဆွဲ ချမှတ်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီး မေလအတွင်းမှာ ထပ်မံ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနိုင်ကောင်း ဆွေးနွေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သလို ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာများ ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ရာ ဒေသခံပြည်သူများက လက်ရှိ အခက်အခဲများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ပြကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုကိစ္စများနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ နော်မေဦးက “ဥပမာ ကျောက်ကြီးနယ်မြေဟာ ၁၉၇၅ - ၇၆ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ဖြတ်လေးဖြတ်ဒဏ်နဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကို တချိန်လုံး ခံလာခဲ့တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ့အထိ ရွာပုန်းရွာရှောင်တွေ ရှိနေဆဲ ပဲ။ ရွာသူရွာသားတွေ တယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စ အဆွဲခံရ၊ အဖမ်းခံရတာ ရှိနေဆဲ ပဲ ဆိုတာ ပြောပြတယ်။ သူတို့ အတွေ့အကြုံအရ လက်ရှိအစိုးရအပေါ်မှာ သူတို့ သံသယတွေ ရှိနေတာ၊ မပြောင်းလဲသေးတဲ့ အခြေအနေတချို့အပေါ်မှာ သူတို့ ယုံကြည်မှု နည်းနေတာ တွေ့ရတယ်“ လို့ ပြောပြပါတယ်။ နော်မေဦးက ဆက်လက်ပြီး ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ “ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀လုံခြုံမှု အာမခံနိုင်ဖို့အတွက်၊ စားနပ်ရိက္ခာ လုံခြုံဖို့အတွက် အဓိကဖြစ်တယ်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့တာ ရှိတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကျမတို့ ပြည်သူလူထုနဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးနဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိပြီး ပြည်သူလူထု လိုအပ်နေတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကျမတို့က ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာ ရှင်းပြတယ်။ ဒါက ဘာနဲ့ ဆက်နွယ်နေသလဲဆိုတော့ KNU ကို မတရားသင်း ကြေငြာထားတာနဲ့ သွားပြီး ဆက်နွယ်နေတယ်။ သမ္မတကြီးက ဒီကိစ္စကို သူ တခါမှ မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး ပေါ့ လေ။ ဒါ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း သမ္မတလုပ်ပိုင်ခွင့် အတိုင်းအတာအတွင်းက ဒီကိစ္စကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးပါ့မယ်ဆိုတာကို ပြောခဲ့တယ်“ လို့ ရှင်းပြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့က KNU ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို ကြိုဆိုတယ်။ များစွာလည်း အောင်မြင်ဖို့အတွက် မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း ပြောတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်၌က စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုတွေ ရှိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသွားတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တချက်က စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်တရပ်လုံးမှာ တပ်မတော်က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပြီး ပါလာဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကို ပြောတယ်။ ဒါကလည်း အင်မတန် အရေးကြီးတယ်။ ကျမတို့ကိုယ်တိုင် အဲဒီလိုပဲ ယူဆတယ်“ လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံးနဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်တို့အကြား နောက်ထပ် ဆွေးနွေးမှုများကို မေလအတွင်း ပြုလုပ်သွားနိုင်ဘွယ်ရှိပြီး မေလကုန်ပိုင်းမှာတော့ စစ်မှန်တဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် လိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကို အပြီးသတ် ချမှတ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံးနဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးနိုင်သော်လည်း ကချင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကတော့ တိုက်ခိုက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်များရဲ့ တိုက်ပွဲများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နော်မေဦးက “အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ တတိုင်းပြည်လုံး အပတ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုတာ ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ တကယ့်တကယ် လက်တွေ့မှာ အပစ်အခတ် ရပ်တယ်ဆိုတာ တဖက်ထဲ ရပ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ နှစ်ဘက်စလုံးက ရပ်မှ ဖြစ်တာ။ ဒိထက်ပိုပြီးတော့ ကျမတို့က ကချင်ကိုယ်စား အပစ်အခတ် ရပ်ပါမယ်လို့ ကရင်က သွားပြောလို့ မရဘူး။ ကျမတို့ ရပ်တည်ချက်ကတော့ တတိုင်းပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီးတော့မှ တတိုင်းပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်မှာ စစ်ဖြစ်နေလို့လည်း ကရင်ပြည် မအေးချမ်းဘူး။ ကရင်မှာ စစ်ဖြစ်နေလို့လည်း ရှမ်းပြည် မအေးချမ်းဘူး။ ဒါ ကျမတို့အားလုံး သဘောပေါက်တယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲတယ်ဆိုတာက စစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့စလုံးက လက်တွဲချင်မှသာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲတယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်“ လို့ ပြောပြသွားပါတယ်။